Edito Taratra Archive | NewsMada | Page 34
Maty ny marina
Par Taratra sur 30/10/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Niteraka resabe tamin’iny herinandro lasa teo iny ny momba ny tanànan’ny Pr Zafy Albert, ny «Villa Elisabeth», eny Ivandry, hoe nisy nivarotra. Siosion-dresaka aloha no nandrenesana azy teny am-boalohany. Nihanahoraka, nihanahoraka. Tamin’ny faramparan’ny herinandro teo, nanomboka nivoaka ny antontan-taratasy isan-karazany. Nipoitra hatramin’ny anarana manam-pahefana, mpitondra ambony tamin’ny fotoan’androny hoe tompon’antoka tamin’ny fivarotana io tanàna io. […]
Tsy misy intsony ny matin’ny pesta
Par Taratra sur 27/10/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Mahavariana ny fomba fikirakirana ny vaovao. Amin’ny fanaovana politika, tena ilaina ny mahafehy ny teny avoaky ny vava, ny vaovao lazaina amin’ny besinimaro. Ao anatin’izany ny fahaizana “milalao” ny hainteny sy ny voambolana lazaina. Mifandray eo akaiky eo koa ny fahaizana milalao na “mampiasa” (raha ny mety kokoa?!) ny serasera sy ny fampitam-baovao. Iaraha-mahalala fa […]
Fitanana fitondrana fotsiny ny kajikajy politika
Par Taratra sur 26/10/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Tsy azo ihodivirana ny fanalana ny filohan’ny Antenimierandoholona? Tsy amin’ny maha ratsirakista azy fotsiny hoe tsy azo itokiana, na efa zokiolona, na… Tsy takona afenina koa ny adilahy sy ady toerana eo anivon’ny samy HVM, araka ny loharanom-baovao mahabe resaka etsy sy eroa. Kajikajy politika famerezan-dia ny fanendrena ny filohan’ny HVM, Rakotovao Rivo, ho loholona? […]
Par Taratra sur 25/10/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Adihevitra, hono, no atao amin’ny fanitsiana ny lalàmpanorenana, fa tsy hoe tsy maintsy hanao fitsapan-kevi-bahoaka amin’izany. Izay ilay fomba fiasan’ny fitondrana? Kitsapatsapa, fitapitaka, fivadibadihan-teny… Tsy mahagaga raha tsy atokisan’ny vahoaka amin’izay lazaina sy atao. Oviana no mba mampiantso adihevitra, raha tsy amin’izay manahirana azy amin’ny tombontsoany sy ny toerany voatohintohina ny mpitondra? Toy ny fanitsiana […]
Mandona tapany mba ho voa erany…
Par Taratra sur 24/10/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Fiteny hoe dony tapany, handoa erany. Tsy inona fa tetika sy fomba hahazoan-tombony amin’ny fifampiraharahana amin’ny hafa. Tsy hoe samy mahazo izany, fa mikendry tombony avo roa heny amin’izay lany sy atao. Amin’izao raharaham-pirenena izao: mby aiza izay amin’ny fifandraisana amin’ny vahiny izay? Eny, na tamin’ny fitondrana nifandimby aza… Tsy mahafa-bela ny fiankinan-doha amin’ny any […]
Mahalala tsy tiana amin’izay…
Par Taratra sur 23/10/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Mitohy hatrany ny fampanantenana, fampandriana adrisa… Eny, izao aza vao misy ny karazana fanamby hoe hanao an’itsy, hanitsy an’iroa. Fanakonana izay tsy vita hatramin’izay sa fitsinjovana mialoha ny fifidianana ho avy? Tsy olom-panjakana tsinona fa olom-pahefana. Saika ny amin’izay toerana sy fahefana izay hatrany no manetsika, na inona filaza sy fanamarinan-tena. Ho azo amin’izany ve […]
Saro-binaniana ny ampitso, na ny anio aza…
Par Taratra sur 21/10/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Inona marina no hivoahana amin’izao kizo misy ny firenena izao noho ny tsy fahombiazan’ny mpitondra? Fahantrana lalina, tsy fandriampahalemana, fidangan’ny vidim-piainana, fihanaky ny valanaretina pesta, tsy fisian’ny asa, tsy fanjarian-tsakafo, tany lasan’ny vahiny.. Ny ratsy no be no ho ny tsara, raha misy. Inona no vahaolana amin’izany rehetra izany? Tomponandraikitra voalohany tsy afa-miala ny fitondram-panjakana, […]
Mendrika ho mpandova ve ?
Par Taratra sur 20/10/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Rahampitso no hatao any Betsiaka, kaominina iray any amin’ny distrikan’Ambilobe, ny fandevenana ny profesora Zafy Albert, ilay nekena fa « rain’ny demokrasia » teto Madagasikara. Hanao rodobe any ireo mpanao politika na maro aza ireo manao sy maneho fihetsika mifanohitra tanteraka amin’ireo fahendrena nasehon’ny profesora fony fahavelony. Nanaiky ny fanesorana azy teo amin’ny toerany izy na fanakianana […]
Ambany maso tsy hita ny vahoaka
Par Taratra sur 19/10/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Mby aiza ny ady amin’ny pesta? Na tena misy ny ihetsehana… Miandry fanampiana avy any ivelany vao tena nihetsika ny fanjakana foibe. Amin’izany, lasa adihevitra ho azy ny hoe: eo amin’ny haavo faharoa sa fahatelo i Madagasikara amin’ny fihanaky ny valanaretina? Ny tsy azo lavina: mitombo ny maty, mitombo ny distrika sy ny faritra tratran’ny […]
« Mandeha ny mandeha »
Par Taratra sur 18/10/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Itangoronana ireo toeram-pivarotana gazety, raha vao maraina ny andro. Fanontaniana mipetraka ao an-tsain’ny tsirairay ny hoe mbola nitombo isa ihany ve ireo voan’ny pesta ? Tafakatra firy indray ny maty ? Tena mampitaintaina isan’andro isan’andro. Na izany aza, « mandeha ny mandeha », araka ny fitenin-jatovo, malaza tato ho ato. « Mandeha ny mandeha »… Mitohy ny asa fitadiavana. Tsy maintsy […]
Aoka izay ny vaovao ratsy
Par Taratra sur 17/10/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Mahafanina! Izay ny amehezana ny vesatry ny saina manoloana ireo vaovao ratsy nisesisesy tamin’iny herinandro iny. Mavesabesatra ny fiatrehana ny fiainana manoloana ireo trangan-javatra maro niseho. Nodimandry ny filoha Zafy Albert, famonoana tamin’ny fomba feno habibiana ankizy, valanaretina pesta miteraka horohorro ary mahafaty olona betsaka, halatra sy vonoan’olona etsy sy eroa, fanafihana mitam-piadiana, dahalo manafika, […]
Tsy voahaja ny maha Repoblika…
Par Taratra sur 14/10/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
14 oktobra 1958-2017. Tsy ampy herintaona dia 60 taona izao ny nijoroan’ny Repoblikan’i Madagasikara. Mbola misy mahatsiaro izany andro izany ve? Na tsaroana aza, tsy misy hetsika amin’ny fomba ofisialy intsony. Ao ny milaza fa efa zary hadino na tsy hajaina sy omen-kasina intsony ny maha Repoblika: anarany fotsiny… Ara-tantara, nambara teny amin’ny efitrano filanonan’ny […]
Par Taratra sur 13/10/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Nafindra any amin’ny BNGRC ny fitantanana ny « Raharaha pesta ». Raha raisina an-tendrony, sokajiana ho toy ny loza voajanahary koa izany ny aretina. Ny fahafantaran’ny maro ity rafitra BNGRC ity, andraikiny ny fitantanana, fiatrehana ny loza voajanahary, toy ny rivodoza, ny tondra-drano, ny haintany, ny dorotrano, sy ny mifandraika amin’izany. Mahavariana ity “fisaloran’andraikitra bevata ity”. Rafi-panjakana matihanina, […]
Mamono afo indray e !
Par Taratra sur 12/10/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Mitohy mandripaka ihany ny aretina pesta. Mitombo hatrany ny isan’ny ireo olona voatily mitondra ity valan’aretina ity. Saiky isan’andro koa no handrenesana fa misy ny maty. Eto Antananarivo sy ny manodidina fotsiny izao, niampy efatra indray ireo namoy ny ainy, omaly. Izany hoe, tafakatra 25 izany izao ireo maty. Izay ny eto an-dRenivohitra sy ny […]
Loza iray, loza roa, loza telo…
Par Taratra sur 11/10/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Tsy mbola misy nahavita ny vitan’izao fitondrana izao, hono, tao anatin’izay 50 taona mahery niverenan’ny Fahaleovantenam-pirenena izay. Marina ve izany? Na izay fitompoana teny fantatra sy fireharehana izay aza, hisy ho sahy ratsy hiteny toy izany ireo mpitondra teo aloha nifandimby? Toy ny hoe hanarina ny fahavoazana rehetra nandritra izay niverenan’ny Fahaleovantena izay no nifanarahan’ny […]
Misavoritaka… vao mainka manaparitaka pesta
Par Taratra sur 10/10/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Ady amin’ny pesta izao… Tsy hita be ihany. Nahoana? Na eo aza ny ezaka etsy sy aroa, mandeha ihany ny resaka eny rehetra eny. Eo, ohatra, ny fanazavana na karazana tolokevitry ny mpitsabo sasany: ady eo anivon’ny fiarahamonina no tokony hatao sy himasoana, fa tsy ady any amin’ny hopitaly. Ny mpitsabo no tokony hantsoin’ny marary […]
Par Taratra sur 09/10/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Mbola ny ady amin’ny pesta aloha izao no mahabe resaka, ihetsiketsehana etsy sy eroa; eny, na misy aza ny tsy te hiray petsapetsa: tsy miteny, tsy mivolana. Miray tsikombakomba amin’ny ratsy? Azy ho azy ny azy, raha ny ataony ihany no ataony. Be tokoa ny raharaha hadinodino sy takona ho azy amin’izao. Sanatria, zaran’ny sasany […]
Par Taratra sur 07/10/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Tena voafehy tokoa sa tsia ny firongatry ny valanaretina pesta amin’izao? Tsy maharaka ny fihazakazaky ny raharaha ny filazan’ny mpitondra. Nambara tamin’ny herinandro, ohatra, fa voafehy ny pesta. Ny faran’ny herinandro ihany, tsy takona afenina fa tsy voafehy akory ny aretina. Tsy vitan’izany, nony nikoropaka ny amin’ny fisian’ny maty hatrany ny vahoaka: nambaran’ny fanjakana indray […]
Miray petsa pesta, amin’ny voalavo
Par Taratra sur 06/10/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
« Douh dah, doukoudoukou dah. Miaka midina izy izany leretsy ê! Fanimpanina aho, tsy metimety ê!”. Tsaroan’ny rehetra tsara angamba, indrindra ireo efa zokinjonkiny, izany andinin-tononkiran’ny tarika Ny Nanahary izany, mitantara ny valan’aretina iray, nampiferotraina ny Malagasy, tamin’ny fotoan’androny. Tsy mifanalavitra loatra amin’izany ity pesta iainan’ny vahoaka ankehitriny ity. Na izany aza, samy manana ny fandraisany […]
Par Taratra sur 05/10/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Aiza ihany no aleha ? Ny marina kokoa, inona ihany no tokony hatao? Samy sahiran-tsaina avokoa ny tsirairay. Aiza ka ny fianakaviana iray trano aza no mifampiahiahy. Taiza avy ny naleha? Sao tany amin’ny toerana misy pesta? Sns. Ny koha-maina kely noho ny andro mivadibadika avy no anondroan’ny olona molotra… Izany rehetra izany, vokatry ny tsy […]
Mampitampim-bava ny tsy fahombiazan’ny mpitondra
Par Taratra sur 04/10/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Hatramin’ny fiandohan’izao fitondrana izao no efa niaraha-nahita sy niaraha-nizaka ny kitoatoa, fitavozavozana, kitsapatsapa lava… Tsy inona fa tsy fahombiazana noho ny tsy fanarahan-dalàna, ny tsy fihainoana ny hafa, ny tsy fijerena na tsy firaharahana ny fiainam-bahoaka… Saika izay mety manohintohina azy ihany no mampikoropaka sy tena imasoany ary itadiavany vahaolana haingana. Na farafaharatsiny, amonoany afo […]
Par Taratra sur 03/10/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Mihazakazaka ny fanatonan-dRafahafatesana ny olona voan’ny pesta raha vao tara ny fitsaboana. Haingana ihany koa anefa ny fifindran’ilay aretina. Midika izany fa tsy tokony hihambahambana ny fandraisana andraikitra manoloana ity loza ity. Tsy tokony hisy ny andraso andraso. Etsy ankilan’izay, tsy toy ny taloha fa haingana ny fiparitahan’ny vaovao sy ny « tsy vaovao », noho ny […]
Pestis, pesta, antambo…
Par Taratra sur 02/10/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Tamin’ny taonjato faha-19, ny taona 1891 raha ny marimarina kokoa, no nahitan’ny dokotera antsoina hoe Alexandre Yesrin ny valanaretina pesta. Avy amin’ny teny latina « pestis », izay midika hoe « fléau » amin’ny teny frantsay, ary… “antambo” amin’ny teny Malagasy, ny hoe “pesta”. Mandia na miaina antambo goavana ny firenena malagasy ankehitriny, vokatry ny fihanaky ny valanaretina petsa. […]
Fampandriana fahalemana, fampandriana adrisa…
Par Taratra sur 30/09/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Hatramin’izao, tsy hita be ihany izay tena afitsoky ny tomponandraikitra sy ny mpitondra amin’ny ady amin’ny tsy fandriampahalemana. Vitavita ho azy amin’ny teny midina na baiko, kabary sy fampitandremana… ? Saika zary fialana hatrany ny hoe samy tomponandraikitra, ary manana adidy amin’ny filazana sy fanomezam-baovao ny amin’ny asan-dahalo sy asan-jiolahy ny vahoaka ifotony? Marina izany, […]
Manjaka ny tsy rariny
Par Taratra sur 29/09/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Miseholany tato ho ato, ny tsy rariny mianjady amin’ny madinika. Tsindry hazolena sy ny kely tsy mba mamindro hatrany. Manamarina izany ny karazana voka-pitsarana tsy mifanaraka amin’ny zava-doza vitan’ilay olona nampangaina. Mpamily nahafaty olona ampolony, zara raha nosazina. Fidirana am-ponja amam-bolana vitsy monja ny azony. Olona namono zaza tamin’ny fomba feno habibiana mendrika ny sazy […]
« Précédent 1 … 32 33 34 35 36 … 55 Suivant »